Mpanamboatra Fanala baraka, Mpanjifa tsy misy blaogy - Aihome
Momba anay sy ny ekipanay
Fan tsy misy blaogy
Teknolojia famokarana matotra
Manana mihoatra ny 300 ny zon'ny fananana ara-tsaina mahaleo tena, ao anatin'izany ny patanty famoronana 25, patanty iraisam-pirenena mihoatra ny 50.
Ao amin'ny HK AIHOME OEM Solution dia takatray fa mitady hitondra ny vokatrao eny an-tsena amin'ny serivisy sy ny asa sahaza azy fotsiny ianao.
Ireo marika fanta-daza eran'izao tontolo izao dia niara-niasa tamin'ny HK AIHOME hisafidy sy hamokarana ny vokatr'izy ireo ary hampitombo ny orinasany.
Ny HK AIHOME dia natokana amin'ny fananganana sehatra famatsiana trano an-tsaina manerantany, manodidina ny fitaovana mahasalama sy manan-tsaina, manome vokatra an-trano avo lenta sy serivisy matihanina ho an'ny mpividy manerantany. Manome ny vahaolana vahaolana tsara indrindra ho an'ny mpividy manerantany amin'ny fiaraha-miasa, afaka manampy anao hahatratra ny fahombiazan'ny orinasanao ianao.
Fananganana Scene Smart
Vokatra farany sy mafana indrindra
Mpankafy Tower mafana sy mangatsiaka
Ny mpankafy tilikambo miaraka amina fanafanana sy fampangatsiahana dia nomen'ny mpamatsy mpiorina tilikambo tsara indrindra any Shina, vidin'ny mpankafy azo ifampiraharahana. Ity heater fanamafisam-peo ho an'ny tilikambo miaraka amina fampangatsiahana sy fiasa fanafanana ity no mpankafy tilikambo tsara indrindra an-tserasera.
Tower Air Purifier Fan miaraka amin'ny Cooler sy Heater
Ny fanadiovan-drivotra sy ny mpanafana fanadiovana miaraka amin'ny sivana HEPA dia misy fanadiovan-drivotra ary ny fiasan'ny mpankafy dia nataon'ny mpamatsy mpankafy fanadiovan-drivotra tsara indrindra. Ity mpankafy misy sivana rivotra ity miaraka amin'ny hafainganam-pandeha sy ny toetr'andro azo ovaina dia mety hitsoka rivotra mangatsiaka sy mafana.
Fanamoriana fanadiovan-drivotra tsy misy pentina
Mpankafy mafana sy mangatsiaka miaraka amin'ny fiasan'ny fanadiovan-drivotra, 3 amin'ny 1 an'ny mpankafy tsy misy blaogy, heater ary fanadiovana rivotra. Ity mpankafy tsy misy mpankafy ity dia misy sivana HEPA ary azo ovaovin'ny orinasa mpankafy tsy misy blaogy.
Ny dehumidifier manokana dia afaka mampihatra fiasa fanampiny toy ny fiasan'ny aromatherapy, ny fanadiovan-drivotra ary ny fanaingoana ny jiro UV. Ity dehumidifier ity dia azo ampiasaina amin'ny lakaly na fampiasana indostrialy ary amin'ny MOQ dia mitaky.
H13 HEPA fanadiovan-drivotra ho an'ny alàlan'ny alikaola sy ny biby fiompy, izay afaka manivana setroka, vovoka ary bobongolo ihany koa. Ity fanadiovan-drivotra fanao an-tserasera ity dia misy rafitra fanivanana rivotra, anisan'izany ny sivana mialoha sy sivana karbonina ary sivana HEPA.
Air Conditioner azo entina
Pfanaraha-maso rivotra malefaka na latabatra fifehezana malefaka malefaka ary fisehoan'ny LCD fotsy, afaka mihetsiketsika ho azy ankavanana sy havanana, miakatra sy midina amin'ny tanana izy. Fanamafisam-peo azo entina mandeha amin'ny alàlan'ny rivotra misy rafitra roa trano ary azo ampiasaina amin'ny fomba maro.
Fan tsy milay amin'ny rivotra ...
Mpankafy Bladeless miaraka amin'i Rem ...
Turbo Circulate Fan, ...
Fan Fanala tsy misy blaogy, C ...
Fanadiovan-drivotra sy hafanana ...
Fanadiovana ny rivotra sy ny lelany ...
Fanadiovan-drivotra tsy manan-tarehy ...
Mpankafy Bladeless Miaraka amin'i Hea ...
Tower tsy mahadomelina Tower Pu ...
Fanadiovan-drivotra amin'ny fiara miaraka amin'ny ...
Fanadio rivotra miaraka amin'ny HEPA ...
Fanadio an-trano an-trano ...
Dehumidifier ho an'ny Basem ...
Dehumidifier tsara indrindra ho an'ny ...
Varotra / trano fidiovana de ...
Dehumidifier amin'ny tabataba ambany ...
3 amin'ny 1 Portable Air Co ...
Mampiasa maro Portable Ai ...
Air Conditioner anaty trano ...
4 amin'ny 1 Portable Type A ...
Teknolojia fampanginana tsy manam-paharoa. Miaina ny onja milamina.
Jiro toe-tsaina marobe
Endri-javatra fanovana hazavana maoderina indrindra Misafidiana jiro 4 hafa
Fanjifana angovo ambany Fandoavam-bola mihena amin'ny angovo
Fandefasana famerenana voaorina
Famerenana famonoana mandeha ho azy azo ovaina. Tsy misy faktiora mavesatra tsy ampoizina.
HangKong Crossbow Brand (Zhejiang), Technology Co. Ltd dia natsangana tamin'ny faran'ny taona 2020, fa ny orinasanay dia niorina tamin'ny 2004. Ny ekipanay dia miorina amin'ny tanjonay fototra hanomezana tolotra varotra tsara sy matihanina ho an'ny mpanjifa manerantany. HK AIHOME, fiaraha-miombon'antoka, dia nanambatra ireo orinasa malaza indrindra ao Shina ary natokana hananganana sehatra famatsiana trano an-trano manerantany, manodidina ny fitaovana salama sy manan-tsaina, manome vokatra an-trano avo lenta sy serivisy matihanina ho an'ny mpividy manerantany .
Room 502, Building 5, 601 Qiuyi Road, Changehe Street, Distrikan'i Binjiang, Hangzhou City, Faritanin'i Zhejiang